Gabon: kubekho inkqubela kunye ezimbini ajongene kuzalwa - JONGA kwi-INTANETHI - IVIDIYO INCOKO №1 - kuhlangana a kubekho inkqubela okanye guy i-intanethi!
Ngomatshi, abancinane Lala weza kwi Indian dolophana ka-Sani ehlabathini - kwaye ngoku kakhulu famous personality ka-MmandlaAbantu ukusuka zonke Iindawo e-India ne-zonke phezu kwehlabathi kwenzeka ndwendwela, yathi dolophana-mathematics utitshala Carsharing Singh ukuba Australian isiqhagamshelanisi ARABIC. Njengoko ngamazwe eendaba iingxelo, revered kuba umntwana, okwangoku, njengoko incarnation Agnezas, i-elephant-namakhaya Hindu i-daisy. Ironically Agneza, phakathi kwezinye izinto, njengoko Inkosi Sciences, kodwa baya kuza Sani ngoku ikhangeleka kuba nje elifutshane. Ngenxa yempilo imeko kubekho inkqubela abancinane ngu ezaziwayo, ngenxa yokuba abazali ukwala ngayo, ngokunxulumene Doctors, ngakumbi uphando lonyango. Abazali asingawo ngokwaneleyo ngobukho yokuba kufuneka kuvumela ukuba siphathe umntwana wakho, wathi M. Ahmed, kwagqirha ngomhla ezikufutshane nurse ndakhangela emva kokuba indlu Safi, ilungu iqela, Lais ka-zokuzalwa. CT okanye magnetic resonance Scans ka-intloko ingaba zithe nako ukubonelela ngakumbi ulwazi oluchanekileyo malunga imeko umntwana. 'Mna ndanikezela kuni CT Yovavanyo ye-free, kodwa kufuneka sukuyihoya kwam', wacaphula yi-ARABIC i-doctors.
Ngokunxulumene abazali, Vinod kwaye Susman Kumar umntwana ingaba senza kakuhle.
I-girls kudla kwaye ndikwazi ukuphefumla kakuhle ngokwesiqhelo. 'Ndibe ndikoyika ekuqaleni kancinci,' yathi kubekho inkqubela ke uyise kwi icawe kwi-Nidda, kilometres ukuya ngasemantla-Mpuma Enew Delhi. 'Kugqirha ndathi emva kokuzalwa, yonke into eqhelekileyo. Kutheni kufuneka sibe ukwazi ukusebenza.
Lala kwikhulu, kuba fed ngomlomo, enye i-Baby ukusebenzisa sucking ye-Koobhontsi.
Nangona kunjalo, asivunywanga abazali, ngokunxulumene Ahmed
Bridge Nadir, wobulali doctor, reacted angrily kwi media hype malunga umntwana. 'Akuvumelekanga i-abnormal umntwana,' wadanduluka doctors ka-journalists. 'Yena sele ezimbini kuphela ajongene nayo, kwaye ukhokela kakhulu eqhelekileyo ebomini. Ukuba yena uyafa, ke, Uthixo ke, uza. Nokuba surgery izakuba kufanelekileyo okanye hayi, ayikwazi ngokunxulumene ingcaphephe, kuphela ngoncedo CT okanye MRI Scans ukucacisa. I-Operation izakuba, kodwa kulo naliphi na ityala, enobunzima kwaye ezinobungozi nkqubo, ingakumbi malformations le uhlobo ingaba kakhulu sown rare kwaye specialists, ngokunxulumene ibhityile. Ngojanuwari, malunga a kubekho inkqubela weza ehlabathini kwi-Dominican Kwiriphabliki, entloko yomkhosi yesibini skull waba ukukhula. Emva surgical nokususwa umntwana wafa. Kulo nyaka uphelileyo, ngoko ke u-yeminyaka ubudala waba Indian kubekho inkqubela abo lwafika nabane izikhali kwaye legs ngomhla apho ihlabathi lusebenza. Wakhe abazali kokuba ekuthiwa umntwana ngokunxulumene Hindu i-daisy Achim, nto leyo represented njengokuba umfazi nabane izikhali. I kubekho inkqubela, supernumerary legs kwaye izikhali baba isuswe kwi marathon msebenzi waba nempumelelo. SPIEGEL-INTANETHI Onke amalungelo agciniwe nokuzala kuphela kunye imvume Olubuyiselweyo GmbH.
OMETV India Jikelele Webcam Ividiyo Incoko
ividiyo fun kuba abantwana ngesondo fun ividiyo free kuba free ngaphandle ubhaliso Chatroulette esisicwangciso-mibuzo roulette kunye umnxeba phezulu Chatroulette zephondo erotic ividiyo incoko ze Dating videos ividiyo ye-Skype Dating free esisicwangciso-mibuzo roulette nge-girls ads exploring